Kamakura, oo loo socdo Japan | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Japan, Maxaa la arkaa
Kamakura waa mid ka mid ah kuwa caadiga ah dalxiisyada laga sameyn karo Tokyo, Caasimada Japan. Haddii adduunku uusan ku sii socon lahayn cudurkan faafa, 2020 wuxuu ahaan lahaa sannadka dalxiiska ugu sarreeya Japan, oo ay la socdaan Olimbikada iyo dhammaantood, marka waa waddan aad loo soo booqday.
Waxaa jira dalxiisyo badan oo sahlan oo laga sameeyo Tokyo iyo Kamakura wax ka yar saacad koonfurta magaalada. Super dhow oo aad loogu taliyay, sababtoo ah marka lagu daro, kuwa caanka ah Kamakura Buddha maxaad ku aragtaa sawirka.
Waa a magaalo xeebeed taas oo saacad u jirta koonfurta dhanka Tokyo. Waqtiga qaar waxay ahayd xarunta siyaasadeed ee dalka, dib ugu laaban qarnigii XNUMXaad, dowlad socotey qarniga oo dhan iyadoo ay gacanta ku heyso qoriga Minamoto iyo taliska Hojo. Markii dambe awooddu waxay u gudubtay magaalada Kyoto, markii ku-xigeenkiisii ​​siyaasadeed uu go'aansaday inuu halkaas dego.
Maanta si fudud waa a magaalo yar oo xasilloon oo leh cibaado badan, taallooyin taariikhi ah, iyo macbudyo. Maaddaama ay tahay xeebta, waxay leedahay xeebo inta badan aad u camiran xagaaga. Sidee loo aadaa Kamakura?
Tareen ahaan waxaa jira saddex ikhtiyaar. Waad qaadan kartaa Khadka Odakyu taas oo ah habka ugu jaban. Waxaad iibsataa Enoshima Kamakura Free Pass oo ay kujirto safarka wareega ee u dhexeeya Shinjuku ee Tokyo iyo Kamakura. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira isticmaalka Enoden, tareen kale laakiin koronto, loogu talagalay oo keliya 1520 yen. Qaabkan gaadiid ahaan waxay qaadataa ilaa 90 daqiiqo in la yimaado, markaa haddii aad rabto inaad waqti yar qaadato waa inaad isticmaashaa khadka JR.
JR ayaa leh Khadka Shonan Shinjuku, kaas oo isku xidha Shinjuku iyo Kamakura hal saac isla markaana ku kacaya 940 yen. Waxaa lagugula talinayaa inaad sugto tareenka ilaa Zushi, oo ah midka istaaga saldhiga Kamakura (laba bixitaan saacaddiiba), haddii kale waa inaad ka beddelataa saldhigga Ofuna. Khad kale ayaa ah JR Yokosuka Khadka isku xirka saldhigga Tokyo iyo Kamakura. Safarku wuxuu qaadanayaa wax ka yar saacad wuxuuna ku kacayaa 940 yen.
Aaggu wuxuu leeyahay laba baas: the Enoshima Kamakura Bilaash Bilaash ah, at 1520 yen, oo ay ku jiraan safarka wareega Shinjuku / Kamakura iyadoo la adeegsanayo Enoden; iyo Hakone Kamakura Gudub, loogu talagalay 7000 yen), kaas oo u oggolaanaya isticmaalka Enoden iyo khadka Odayu, laakiin sidoo kale gaadiidka hareeraha Hakone saddex maalmood oo isku xigta.
Maxaan ku booqdaa Kamakura? Soojiidashada dalxiisyada waaweyn ee Kamakura waxaa loo qaybiyaa saddex aag oo u dhow saldhigyada: oo u dhow Saldhigga Kita Kamakura, Saldhigga Kamakura iyo Saldhigga Hase. Sidee tahay magaalo yar runtii waad ku socon kartaa lug ama, wax aad u qurux badan, ijaar baaskiil. Waxa kale oo jira basas iyo tagaasida, haddii aad rabto inaad gaarto meelo fogfog.
Booqashadeenii ugu horreysay ayaa daaran Kamakura Great Buddha, Kamakura Daibutsu. Waa taallo naxaas ah oo Amida Buddha ah oo ku taal barxadda Macbadka Kotokuin. Waxay taagan tahay ku dhowaad kow iyo toban mitir iyo badh waana taalada labaad ee ugu dheer naxaas Buddha ee dalka. Waxay ku taariikheysneyd 1252 waxayna asal ahaan ku jirtay gudaha hoolka weyn ee weyn ee macbadka, laakiin goobta waxaa ku dhacay dhowr duufaanno qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad sidaa darteed waxaa markii dambe la go’aamiyay in si toos ah banaanka loo dhigo.
Buddha weyn ee Kamakura waxay ujirtaa 10 daqiiqo socod ama wax kayar saldhigga Hase, saldhigga saddexaad ee khadka Enoden ee Kamakura. Saldhigga Terminal-ka Enoden wuxuu ku agyaala JR Kamakura Station tareenkan koronto ee yar wuxuu isku xira Kamakura iyo Enoshima iyo Fujisawa. Buudha wuxuu xirnaa ilaa Juun sababo la xiriira coronavirus-ka maantana wuu furan yahay laakiin saacadihiisu way yaraadeen: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Gelitaanku waa 300 oo kaliya, wax kayar $ 3.
El Macbadka Hokokuji wuu yar yahay, qurux badan yahay, xoogaana wuu fog yahay. Waxay ka tirsan tahay dariiqada Rinzai ee Zen Buddhism waxaana la aasaasay horaantii xilligii Muromachi, iyadoo ahayd macbadka qoyska ee qabiilka Ashikaga. Waxay u muuqataa markii aan buurta fuulayno, oo aan dhaafaynno barxad iyo beer yar illaa aan ka gaadhno hoolka weyn ee dib loo dhisay horraantii qarnigii 1923aad dhulgariirkii weynaa ee Kanto ee XNUMX ka dib.
Taallada ugu qiimaha badan macbudku waa ta Buddha, laakiin sidoo kale waxaa ku yaal munaarad yar oo dawan iyo tan ugu weyn oo dhan: wax yar oo qurux badan beer bamboo kaas oo ka dambeeya hoolka weyn. Waxaa jira sida 2000 bambo iyo wadiiqooyin cidhiidhi ah oo lagu dhex socdo, a aqalka shaaha halka laga cabo shaah matcha (shaah cagaaran), oo ka fikiraya quruxdan. Waxa kale oo jira godad u muuqda inay hayaan dambaskii qaar ka mid ah salaadiintii reer Ashikaga.
Sideed ku tagtaa Macbadka Hokokuji? Ka socodka socodka baska Jomyoji (tan waxaa lagu qaadaa saldhiga Kamakura, waa 10 daqiiqo 200 yen). Waxaad ka qaadan kartaa 23, 24 ama 36. Haddii aad jeceshahay inaad socoto, lug ayaad ku imaan doontaa nus saac ama wax yar ka badan isla rugta tareenka. Beerta Bamboo waxay furan tahay 9ka subaxnimo ilaa 4ta galabnimo waxayna xirmaysaa Diseembar 29 ilaa Janaayo 3. Qiimahiisu waa 300 yen hadaad rabto adeega shaaha waxaad bixinaysaa 600 yen oo dheeri ah.
Macbudka kale waa Hase Temple, oo ka tirsan dariiqada Jodo oo aad caan ugu ah heerkeeda sare kow iyo toban madax madax ah Kannon, ilaahadda naxariista. Hoolka waa ku dhowaad toban mitir dhererkiisana taallada waxaa laga sameeyay alwaax jilicsan, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn nooceeda oo kale Japan. Halyeeyo ayaa leh in alwaaxdani ay lamid yihiin kuwii loo adeegsaday in lagu xardho taalada Kannon ee Nara. Macbudku wuxuu leeyahay matxaf, kaas oo bixiya iridda dheeraadka ah, oo haysa taallooyin badan, sawirro iyo kuwa kale. Dhinaca kale waxa ku yaal Hoolka Amida-do oo leh taallo toban-dhudhun oo dahab ah oo Amida Buddha ah.
Macbudku, maxaa yeelay wuxuu ku yaallay buur dhinaceeda, wuxuu leeyahay a Terrace qurux badan oo ka imanaya meesha aragtida magaalada Kamakura ay qurux badan tahay. Waxaa sidoo kale jira makhaayad aad ugu raaxeysan karto aamusnaan waxaadna arki doontaa, oo ku xigta jaranjarooyinka kor iyo hoos u kacaya, boqollaal taallooyin yaryar oo ah Jizo Bodhisattva, oo ka caawiya nafta carruurta inay janno gaaraan.
Midig salka hoose ee geedka waa albaabka laga galo macbudka, oo leh beero iyo balliyo. Hasedera waxay shan daqiiqo u jirtaa saldhigga Hase. Wuxuu furmayaa 8da subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo iyo ilaa 5ta subaxnimo inta u dhaxeysa Oktoobar iyo Febraayo. Ma xidho maalin kasta albaabkuna wuxuu ku kacayaa 400 yen.
Macbudka ugu muhiimsan Kamakura waa Tsurugaoka Hachimangu. Waxaa la aasaasay sanadkii 1603 waxaana loo hibeeyay Hachiman, ilaaha ilaaliyaha qoyska Minamoto iyo guud ahaan samurai. Macbudka waxaa laga soo maro waddo dheer oo ka timaadda guddiga loo yaqaan 'Kamakura boardwalk', oo magaalada oo dhan ka gudbaya kana gudbaya dhowr toris. Qolka ugu weyni wuxuu ku yaal sallaan jaranjarada dusheeda. Gudaha waxaa ku yaal madxaf leh seefo, dukumiintiyo, waji dabool ...
Dhinaca midig ee jaranjarada, illaa 2010, waxaa jiray geed ginko oo mar uun u adeegay sidii meel lagu gabbado oo lagu weeraro qoriga. Qadiimiga ah, oo si qurux badan u dahabi dayrta, kama aysan badbaadin duufaan bishii Maarso 2010 wayna dhimatay.
Saldhigyada jaranjarada waxaa ku yaal masrax ay inta badan muusig iyo dhaanto ka muuqdaan waxaadna arkeysaa meel kale oo muqadas ah iyo dhismayaal gacan saar ah oo ku xeeran halkaas. Waxaad sidoo kale ka imaan kartaa macbudka Saldhigga Kamakura, bas ama lugo. Ogolaanshuhu waa bilaash.
Ma qeexi karno tirada macbudyada ay leeyihiin Kamakura laakiin waxaan magacaabi karnaa: Kenchoji, Zeniarai, Engakuji, Meigetsuin, Ankokuronji, Jomyoji, Zuisenji, Myohonji, Jochiji, Tokeiji iyo Jufukuji. Dhammaantood way qurux badan yihiin laakiin waa run oo kuma bixin kartid inaad aragtid macbudyo, markii saddexaad dhammaantood waa isku mid. Waxaan ku talinaynaa waa booqo Enoshima iyo xeebteeda oo xoogaa socod ah ku samee.
Enoshima waa jasiirad yar oo u dhow Tokyo kaas oo ku xidha xeebta buundo aad lug kaga gudubto. Jasiiraddu waxay leedahay meel barakaysan, munaarad indha-indheyn, boholo iyo beero. Buurta geedaha leh waxaa lagu baari karaa lugo waxaadna arki doontaa cibaado badan oo loogu talagalay Benten, ilaahadda nasiib wanaag, caafimaad iyo muusig.
Waxaa sidoo kale jira quraaradda xeebtuna waa fiican tahay, oo leh biyo diirran, deggan oo qabow! Laga soo bilaabo Kamakura Enoden wuxuu qaadanayaa 25 daqiiqo, laga bilaabo Shinjuku waxaad sidoo kale halkaas ka heli kartaa isla markaana ka imaan kartaa saldhigga Tokyo.
Ugu dambeyntii, Hadaad jeceshahay inaad lugeeysid Kamakura waxaa jira seddex wado: Safarkii Daibutsu, kii Tenen iyo kii Gionyama, maanta waa la xiray sababo la xiriira duufaantii sanadkii hore dhacday. Haddii aad tagto sannadka dambe, iskuday inaad hubiso kuwa furan. Iyagu waa jidad qurux badan, cagaaran oo ka gudba buuraha isku xidha macbudyo iyo cibaado. Guud ahaan, ma sii socdaan wax ka badan nus saac illaa 90 daqiiqo, laakiin lama jeexjeexin ee iska ilaali kabaha iyo roobka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Kamakura, meel loo aado Japan
Waxa lagu arko Ourense